भक्तपुरमा सवारी चलाउदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुस है , कारवाहीमा पर्नुहोला ! - नेपालबहस
गृहपृष्ठ सुरक्षा/अपराध दुर्घटना भक्तपुरमा सवारी चलाउदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुस है , कारवाहीमा पर्नुहोला !
भक्तपुर । के तपाई सवारी साधन चलाएर भक्तपुर जादै हुनुहुन्छ वा भक्तपुरतर्फ आउदै हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो गदै हुनुहुन्छ भने आफ्ले चलाईरहेको सवारीको गति कति छ भनेर अबदेखि होस् गर्नुस है ? नत्र कारवाहीमा पर्नुहोला । ’cause प्रहरीले साँगादेखि जडिवुटी पुलसम्मको हाईवे यात्रा गर्दा हरेक सवारी साधनको गति ५० किमी प्रतिघण्टा निर्धारण गरेको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले अरनिको राजमार्ग खण्डअन्तर्गत भक्तपुर क्षेत्रमा बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी साधनको गति निर्धारण गरेको छ । प्रहरीले काभ्रेको साँगाबाट भक्तपुर भित्रिएपछि जडीबुटी मनोहरा पुलसम्म प्रत्येक सवारीसाधनको अत्यधिक गति प्रतिघण्टा ५० किलोमिटर निर्धारण गरेको हो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सविन प्रधानले आजैदेखि लागू हुने गरी सवारीको गति निर्धारण गरेको बताउँदै अटेर गर्ने सवारी चालकलाई तत्कालै कारवाही गरिने बताए । उनले भने, “आजैदेखि यो नियम लागू गरेका छाैं, आजबाट गति मापन गर्नेछौँ, शुरुमा केही दिन सवारी चालकलाई सम्झाउने छाैं, असार १ गतेदेखि भने कारवाही अगाडि बढाउने छाै. ।”
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जडीबुटी मनोहरापुलदेखि मध्यपुर थिमी, सूर्यविनायक, जगाती, पलासे हुदै काभ्रे र भक्तपुरको सिमाना साँगासम्मका लागि गति निर्धारण गरिएको हो । प्रतिघण्टा २० किलोमिटरको गतिमा गुडेका सवारी साधनले ठक्कर नै दिए पनि मानवीय क्षति नहुने गरेको पाइएको तर तीव्र गतिमा चल्ने सवारी साधनले ठक्कर दिए ज्यानै जाने गरी मानवीय क्षति हुने गरेकाले गति सीमित गर्न यो नियम लागू गरेको उनको भनाइ थियो ।
सडक, यातायात र विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफल र सहमतिमा यो नियम लागू गरेको उनले बताए। सवारी साधनको गति मापनका लागि प्रहरीले एक राडार गन र एक लेजर गन ल्याएर परीक्षण गरिसकेको बताउँदै उनले यो सडकखण्डमा कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँबाट सवारीको गति नाप्ने बताए ।
यातायात व्यवस्था ऐन
अघिल्लो लेखहिमनदी माइनस तीन डिग्रीसम्म चिसो
अर्को लेखसनराइज बैंकको शाखा खुलेसँगै राप्तिपारीका नेपाली गाउँमा चल्यो रुपैयाँ